သင့်ကလေးကို စိတ်ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ထိန်းသိမ်းတတ်လာအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? - Burmese Edition | Sunthit Myanmar
Home Lifestyle သင့်ကလေးကို စိတ်ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ထိန်းသိမ်းတတ်လာအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
သင့်ကလေးကို စိတ်ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ထိန်းသိမ်းတတ်လာအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
ပျိုဖော်ဝင်စအချိန်တွေဟာ ကလေးတွေအတွက်အရမ်းကိုခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်တွေဟာ များသောအားဖြင့် ချစ်မှုရေးရာနဲ့ လူမှုရေးရာ ကျော်ကြားမှုတွေကို အလေးထားတတ်ပြီး အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူတို့အပေါ်ကို လူတွေက ပြန်လည် အာရုံစိုက်လာအောင် လုပ်ဆောင်တတ်တဲ့ စိတ်ပညာအခြေခံ နဲ့ ခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာ ခံနိုင်ရည်တွေအားနည်းနေသေးတဲ့အချိန်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့မှာ ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီး အတွေ့အကြုံတွေမရှိတာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပြီး ဒီလူမှုရေးဆိုင်ရာအားနည်းမှုနဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတွေဆိုတာလည်း ကျော်လွှားလို့ရတဲ့ အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကို မသိသေးတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တက်ကဆက် တက္ကသိုလ်က စိတ်ပညာရှင် David S.Yeager ရှာဖွေတွေ့ရှိထားတာက ကလေးတွေကို ဘယ်လိုမျိုးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သတင်းအချက်အလက်ပေးတာနဲ့ သူတို့နဲ့ရွယ်တူတွေဟာ ဆက်လက်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးလာကြပြီး ကိုယ်ခန္ဓာကာကွယ်ဆေးထိုးခံထားရတဲ့ လူငယ်တွေဟာ စိတ်ဖီးစီးမှုအတိုင်းအတာမှာ ပြောင်းလဲမှုတွေရှိနေတာကို သူကတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။
ဒေါက်တာ Yeager ကဒီလိုတွေ့ရှိမှုတွေရဖို့အတွက် စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမ ဆယ်ကျော်သက်အဖွဲ့ကို လူငယ်တွေရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဟာ ဘယ်လိုဆက်လက်ဖွံ့ဖြိုးနေတယ်ဆိုတာကို သာမန်ကာလျှံကာလောက်ရေးထားတဲ့ သိပ္ပံဆောင်းပါးကိုဖတ်ခိုင်းပါတယ်။ နောက်ပြီး ရှုပ်ထွေးလှတဲ့လူမှုရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆယ်ကျော်သက်တွေက ဘယ်လိုကျော်လွှားကြတယ်ဆိုတာနဲ့ သူတို့ကိုယ်တိုင် ဒီလိုအခက်အခဲတွေအတွက် ပြောင်းလဲလို့ရတယ်ဆို့တဲ့ ဆောင်းပါးကိုလည်းဖတ်ခိုင်းပါတယ်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ထိန်းချုပ်ခံရတဲ့အဖွဲ့ က ဆောင်းပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာသတင်းအချက်အလက်မှပြန်မပြောနိုင်ပါဘူး။
နောက်ပြီး အဖွဲ့နှစ်ခုကို စိတ်ဖိစီးစေလောက်တဲ့ မိန့်ခွန်းပေးခြင်းအလုပ်ကို သူတို့ကို လုပ်ဆောင်ခိုင်းပါတယ်။ ဒီအတွက်ပရိတ်သတ်တွေကို သူတို့နဲ့ မရင်းနှီးတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်တွေကို နားထောင်ခိုင်းပါတယ်။ သူတို့အချင်းချင်းမရင်းနှီးတဲ့အခါကျတော့ ပရိတ်သတ်တွေက လက်ပိုက်တဲ့အနေအထားနဲ့ နားထောင်ခဲ့ကြပြီး စကားပြောတဲ့လူကို ရန်လိုတဲ့ အမှုအရာလုပ်သလိုဖြစ်သွားပါတယ်။
စင်ရှေ့မှာ သေချာစနစ်တကျနဲ့ ပြောတဲ့အခါမှာလည်း စိတ်ဖိစီးမှုကို အတတ်နိုင်ဆုံး ထိန်းချုပ်ဖို့ သူတို့ရဲ့ စွမ်းရည်တွေကို ထွက်ပေါ်လာအောင် ကြိုတင်သင်တန်း ပေးခြင်းခံထားရတဲ့အဖွဲ့ကတော့ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ ရန်လိုတဲ့ပုံစံပြမှုကို သိပ်မခံရပါဘူး။ ထိန်းချုပ်ခံရတဲ့အဖွဲ့ကတော့ သူတို့ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုကို အတော်များများ ထိန်းနိုင်ကြပါတယ်။ သုတေသီတွေက သူတို့သုတေသနကို တစ်ကယ်လက်တွေ့မှာလည်း စမ်းသပ်ပါတယ်။ တစ်နေ့တာလုံးမှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အဆင်ပြေပြေဆက်ဆံခြင်းမရှိတဲ့ ကိုးတန်းကျောင်းသူတွေရဲ့ steroid ဟော်မုန်းကို တိုင်းတာပါတယ်။
တိုင်းတာရာမှာတော့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး သင်တန်းပေးခြင်းခံထားရတဲ့သူတွေက ဒီအတိုင်းသာမာန်သူတွေထက် လူမှုဆက်ဆံရေးပိုအားကောင်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
New York Times က ထောက်ပြတဲ့ အဓိကတစ်ချက်ကတော့ ဆယ်ကျော်သက်တွေပထမဆုံး ရလေ့ရှိတဲ့ သင်ခန်းစာကတော့ သူတို့ရွယ်တူ ဆယ်ကျော်သက်တွေထဲကဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါက်တာ Yeager ပြောတာက တစ်ခြားကလေးတွေကို စည်းရုံးဖို့ ကလေးတွေကို အကူအညီတောင်းတာက သူတို့ကိုလေးစားရာလည်းရောက်ပြီး ခွန်အားပေးရာလည်းရောက်ပါတယ်။ နောက်တစ်မျိုးပြောရရင် သူတို့ရဲ့ ကလေးတွေကို “ဒီဟာလည်းပြီးသွားမှာပါ” လို့ အဖေတွေက မိန့်ခွန်းခြွေတာက သိပ်ပြီးတော့ထိရောက်မှုမရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် သူတို့နဲ့ အသက်မတိမ်းမယိမ်းရှိတဲ့ သူတို့ အကိုတွေ၊ အမတွေ၊ တစ်ဝမ်းကွဲတွေကို သူတို့ကိုယ်တိုင် ကို အကူအညီတောင်းခိုင်းတာက သူတို့တွေကြားမှာ ရင်းနှီးမှုတွေပိုတိုးစေပါတယ်။ နောက်ပြီး သူတို့ကို သူတို့ထက်ငယ်တဲ့သူတွေကို အကြံဉာဏ်ပေးတာတွေလုပ်ခိုင်းပါ။ ဒီလို လူတွေကြားမှာပြောင်းလဲမှုတွေရှိတာကို သူတို့တွေ သိလာလေလေ သူတို့ရဲ့ ဘဝဟာပိုပျော်စရာကောင်းလေလေဖြစ်လာတာပါပဲ။
သင့္ကေလးကို စိတ္ခံစားခ်က္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ထိန္းသိမ္းတတ္လာေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ?
Previous article ဉာဏ်ရည်မြင့်မားစေမယ့်နည်းလမ်းများ
Next article NASA မှ ကပ်ပလာ ၉၀လို့အမည်ပေးထားတဲ့ ဂြိုလ်အသစ်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိ